Voahodidin’ny Korontan-trano Rava, Naato Ny Nofinofin’ity Mpivarotra Voninkazo Ao Syria Ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jona 2016 4:26 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Español, Italiano, Português, Français, عربي, English
Nour, 22 taona. Douma, Ghouta Atsinanana, Syria. “Naka sary aho mba hampiseho ny zavatra iainanay eo ivelan'izao tontolo izao.” 22 Janoary, 2016.
Ity tantara ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Syria Untold, tetikasa tsy miankina filazana tantara manadihady ny tolon'ny Syriana, ary avoaka ato amin'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nivarotra voninkazo i Nour, mpianatra toe-karena ao amin'ny Anjerimanontolon'i Damaskosy taloha mba handoavana ny fandaniany tamin'ny taona 2011. 17 taona izy tamin'izany ary nanofy handao an'i Syria hamonjy firenen-kafa mba hanohy ny fianarany.
Tamin'ny fanombohan'ny fitroarana 2011, resy lahatra i Nour fa efa akaiky ny fiafaran'ny ny fitondran'ny filoha Bashar al-Assad am-polony taonany ary afaka hanomboka hanangana indray ny fiarahamonin'izy ireo ao anatin'ny fahalalahana sy ny demokrasia indray ny Syriana. Tahaka ny Syriana maro hafa, nampiato ny tanjony manokana napetrany amin'ny hoavy hita mialoha izy ary nijanona tsy nivarotra raozy amin'ny fandoavana ny vola lany amin'ny fianarany. Araka izany, nanatevin-daharana ny hetsika tsy misy herisetra manohitra an'i Asaad izy, hanova mandrakizay ny fiainany.
Isan'andro isan'andro, nanova ny revolisiona ho ady ny fitondrana ary naka ireo zatovolahy indray nihira tamin'izany, na tamin'ny alalan'ny fiantsoana ho miaramila tsy maintsy atao na tamin'ny fametrahana fepetra ahatonga azy ireo hanatevin-daharana ny mpanohitra mitam-piadiana
Vokatr'izany, tsy maintsy niafina sy nifindrafindra toerana i Nour, no sady nikarakara hetsi-panoherana. Ny taona manaraka, navadiky ny ady avy amin'ny fanafoanana fotsiny ny fihetsiketsehana ny famindra-toerana ny olona nandritra ny hetsika miaramila. Niezaka nandositra ny firenena i Nour saingy tsy afaka. Nampidirin'ny governemanta tao anaty lisitra mainty izy noho ny fandraisany anjara tamin'ny fihetsiketsehana milamina sy ny fandavany hanao raharaha miaramila.
Nihamafy ny ady tao Douma, tanàna enina kilaometatra miala ao Damaskosy. Nametraka fahirano feno tao an-tanàna ny tafik'i Assad nanomboka tamin'ny 25 Oktobra 2012, izay notanterahina miaraka amin'ireo hetsika an'habakabaka sy fahirano feno. Nanomboka nahatsapa fahafatesana isaky ny mihetsika i Nour, ilay mpivarotra voninkazo, mahita balafomanga mamono olona eny amin'ny trano. Voafetra tamin'ny fitaovam-piadiana sy ny fahafatesana ny fanontaniany: “Bala afomanga anaty tany ve izany? Sa baomba amin'ny barika? Matahotra ny ho faty ao anaty korontan-trano rava ve aho? “
Nour, 22 taona. Douma, Atsinanan'i Ghouta, Syria. “Rehefa tapitra ny ady, maniry ny hiverina aho mba hanohy ny nofinofiko.” 22 Janoary 2016.
Satria tsy mivarotra voninkazo intsony i Nour, nahita asa hafa izy, nianatra momba ny fakantsary izy. Nianatra ity fahaizana vaovao ity izy mba hanehoana amin'izao tontolo izao ny zava-mitranga ao Douma. Ho an'ny vehivavy, ankizy sy ny antitra niatrika ireo loza ireo isan'andro, manao ity asa ity i Nour mandraka androany.
Mbola manana fanantenana isian'ny fanavotana i Nour: nitazona ny nofinofiny sy mibanjina ny hoavy izy na dia teo aza ny loza natrehany maso nandritra ny ady. Nahatonga ny fanahiny ho antitra kokoa noho ny taonany ny dimy taona lasa. Monina ao Douma ao anatin'ny fahirano nandritra ny telo taona, tsy manana fanantenana izy saingy indray andro dia hahita ny nofinofiny hihavao.
Natao tamin'ny teny Arabo ny tatitra tamin'ity tantara ity tany am-boalohany, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Syria Untold, Humans of Syria, sy ny Radio Souriali. Nadikan'i Lilah Khoja ho amin'ny teny Anglisy ity tantara ity.